Angovo avy amin'ny masoandro manohitra ny angovo azo havaozina hafa | Fanavaozana maintso
Daniel Palomino | | Herin'ny rivotra, angovo hydraulic, Angovo Solar Photovoltaic
Ny angovo azo havaozina rehetra dia samy manana ny tombony ananany, ary koa ny fihenanyAhoana anefa raha ampitahaina amin'ny angovo azo havaozina hafa ny angovo avy amin'ny masoandro?
Ohatra, amin'ny herin'ny herinaratra sy ny herin'ny rivotra dia misy fahasamihafana lehibe raha oharina amin'ny herin'ny masoandro.
Ny ankamaroan'ireo fahasamihafana ireo dia azo jerena amin'ny ankapobeny amin'ny firenena maro izay nametraka azy ireo, fa raha mijery an'i Espana isika, dia mbola lehibe kokoa io fahasamihafana io.
1 angovo hydraulic
2 Herin'ny rivotra
3 Angovo avy amin'ny masoandro
Raha miresaka kely momba ny angovo tsirairay voalaza dia azoko lazaina izany amin'ny tranga angovo hydraulic amin'ny alàlan'ny fananana fitahirizana rano ampy ho voka-pambolena sy fiompiana ity angovo ity dia azontsika tratrarina tsy misy hafa noho ny tarehimarika 20.000 MW.
Saingy, misy foana ny, saingy, araka ny efa noresahiko, ny teny majika eto dia "operative" satria tsy ny reservoirs rehetra no afaka miasa Tsy ny olana amin'ny fikojakojana na ny fandidiana (izay ho eo ihany koa no tiako horesahina) fa ny rano, io loharano voajanahary zara raha ilaina hamokarana io angovo io.
Miaraka amin'ny voly manakaiky ny fitahirizan-drano izay mandray rano ho an'ny fanondrahana, ny filàna fototra sy ny haintany mahazatra an'ny firenentsika na farafaharatsiny amin'ny ampahany, dia mahatonga ny fitahirizana rano maro tsy afaka manomboka.
Midika izany fa amin'ny ity angovo ity dia tsy azo isaina tsy tapaka Noho ny toe-piainan'ny rotsakorana sy ny fitehirizana rano takiana mba hanatanterahana ireo riandrano sy hamokarana angovo ilaina dia tsy maintsy fenoina.
Amin'ny lafiny iray dia manana isika ny angovo eolika, manana fahaiza-manao fotodrafitrasa lehibe ananan'io angovo vitantsika io mamokatra 40% eo ho eo amin'ny totaliny ilaina, izay mitovy amin'ny 23.000MW, ary amin'izany dia afaka mamatsy ampahany lehibe amin'ny faritany Espaniola.
Eto indray dia misy teny majika iray hafa izay mety efa tao an-tsainao, "rivotra", tokoa, ao andro tsy misy rivotra tsy misy vokatra ary amin'izany dia manana turbine rivotra vitsivitsy fotsiny isika nefa tsy manao na inona na inona.
Angovo avy amin'ny masoandro
Na izany aza, ary tsy manitatra ny tenako intsony amin'ny fanavaozana teo aloha aho, manana ny angovo avy amin'ny masoandro.
Tsy maninona izay misy ny zavamaniry famokarana anao, na aiza na aiza faritra misy an'i Espana angovo no hamokarana isan'andro isan'andro amin'ny taona.
Espanya dia ny tanin'ny Masoandro ary tsy maintsy manararaotra an'izany isika amin'ny fomba sasany.
Eto ianao no hilaza amiko, tsy misy teny majika amin'ny angovo avy amin'ny masoandro toy ny "rahona"?
Eny tokoa, fa Na dia rahona aza dia mitohy ny fahatongavan'ny hazavana Ary ny zavamaniry masoandro dia afaka manararaotra an'io angovo io koa, mazava ho azy fa hamokatra fahaiza-manao kely kokoa noho ny amin'ny andro main-tany izy ireo, nefa kosa.
Ary "alina"? amin'ity tranga ity dia azontsika atao ny milaza fa raha marina fa ny angovo avy amin'ny masoandro dia tsy dia ampiasaina firy amin'ny alina dia midika izany fa tsy novokarina izy io, fa marina ihany koa fa mandritra io vanim-potoana io dia ambany dia ambany ny fitakiana angovo.
Raha manontany tena ianao hoe maninona ny angovo avy amin'ny masoandro no tsy novolavolaina bebe kokoa taloha kokoa raha oharina amin'ny angovo rivotra, dia holazaiko anao izany ho an'ny vidiny.
Isika rehetra dia mijery ao am-paosintsika ary raha tsy mifantoka fotsiny amin'izany isika dia samy hafa be ny vidin'ny iray sy ny angovo hafa.
Niady izy ireo mba hihena ary nilatsaka izy ireo tato anatin'ny taona vitsivitsy raha resaka angovo avy amin'ny masoandro nefa mbola lafo lavitra noho ny herin'ny rivotra ny vidiny.
Toa izany mahasoa kokoa ny mampihatra angovo rivotra noho ny angovo avy amin'ny masoandro na eo aza ny fahitana ny tombony lehibe voalaza teo aloha tao anatin'ny andro maromaro izay ny angovo avy amin'ny rivotra dia tsy hamokatra na inona na inona noho ny tsy fisian'ny rivotra raha ny angovo avy amin'ny masoandro kosa dia maharitra amin'ny famokarana azy.
Ho fanampin'izay, miditra amin'ny politika amin'ny fomba faran'izay madiodio isika, tsy te-hihoatra ny faran'ity lohahevitra ity aho noho ny antony maro ka kapoka kely fotsiny no homeko anao.
Ny fahafantarana an'i Espana, raha ambany noho ny rivotra ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro, Toa hitako fa mbola handresy ny herin'ny rivotra Satria ny tena hevitra momba ny famokarana angovo mitohy dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny angovo avy amin'ny masoandro mijanona indraindray.
Manana izany ny ohatra mazava Murcia izay nalemy an-taonany maro na eo aza ny fananana faritra manana tombontsoa amin'ny fametrahana angovo toy izany.
Toa mandroso ny zava-drehetra ary nilatsaka ny fijanonana, saingy ny sakana napetraka ho an'izany dia manaitra.
Firenena izay toa tsy rariny, Tsy miaiky ampiasao an-tsitrapo ireo angovo ireo ny "fihinanan-tena" ary afaka mampihena ny isa mampatahotra ho an'ny fianakaviana maro amin'ny faktiora.
Hatreto dia tonga tamin'ity fisaintsainana farany ity aho ary nilaza fotsiny fa na dia toa tiako fotsiny aza ny Masoandro (raha miaraka amina piknikzy tsara lavitra kokoa) dia tsy toy izany, miloka amin'ny herin'ny hery rehetra azo havaozina aho, ny sasany tsara kokoa noho ny Hafa, na dia miankina amin'ny toerana misy azy ireo aza izany ary mila manana ireo hery rehetra ireo ianao hahafahanao manome ny olon-drehetra.
Satria azo havaozina ny ho avy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Angovo avy amin'ny masoandro sy ny angovo azo havaozina hafa
Nohazavaina tsara ary, mazava ho azy, nifanaraka tamin'izay voalaza indrindra.
Fantatsika daholo ny resaka politika ... na dia tsy fantatra intsony ny antony, tsy hita taratra ao anaty vata fandatsaham-bato izany. Na izany na tsy izany, mbola ondry isika amin'izay lazain'ny mpiandry
Misaotra betsaka Carlos, faly aho fa tianao izany.
Ny olana lehibe dia ny ary amin'ny farany ny fanavaozana sy ny hetsika hafa hanatsarana ny kalitaon'ny fiainantsika dia tavela lavitra any aoriana.
Ireo mpiandry ondry, araka ny filazanao, dia tsy dia mahay loatra amin'ny asany ary mahatsikaritra izany matetika i Espana.
Ny fampitahana amin'ny herin'ny rivotra amin'ny famokarana bebe kokoa na latsaka dia tsy dia henjana loatra. Mahaliana ny manome ny fampitahana isa maromaro toy ny salan'isan'ny zavamaniry iray ary ny iray hafa any Espana. Ankoatr'izay, misy ny anton-javatra izay tsy raisina matetika rehefa ampitahaina, toy ny tany onenan'izy ireo sy ny fampiasana mifanaraka amin'izany amin'ny fametrahana azy.
Ny fampitahana ny famokarana herinaratra fotsiny no nifantohako satria io no tena azontsika "jerena" raha hiresaka amintsika momba ny fanjifana angovo.
Mazava ho azy fa azontsika atao ny mampitaha ireo angovo ireo sy ny sisa amin'ireo anton-javatra hafa tokony harahina, toy ny tany, ny vidin'ny famokarana, ny fiantraikan'izany, ny tombony ary ny fatiantoka ary ny maro hafa sns.
Ny olana, ny iray ihany no tokony hifantohanao satria raha miresaka ny zava-drehetra isika, dia afaka manoratra boky.
Miarahaba anao Mario, misaotra anao tamin'ny hevitrao.
Karazana fitaterana inona no mahomby indrindra amin'ny UE?
Espana dia anisan'ny firenena eropeana izay mampihena kely indrindra ny fandefasana azy